Banaanbaxyo looga soo horjeedo Donald Trump oo ruxay qeybo ka mid ah Mareykanka (SAWIRO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Banaanbaxyo looga soo horjeedo Donald Trump oo ruxay qeybo ka mid ah Mareykanka (SAWIRO)
Waxaa qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalka Mareykanka ka bilawday banaanbaxyo aad u waaweyn ee looga soo horjeedo guusha uu gaaray madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump.
Banaanbaxyadaan ayaa ka dhacay magaalooyinka ay ka mid yihiin Philadelphia, Los Angels, Chicago, Seattle iyo New York, waxayna dadka banaanbaxa dhigaayay ay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah Donald Trump.
Erayada ay dadkaasi ku dhawaaqayeen ayaa waxaa ka mid ahaa “Not my President” taas oo micnaheedu yahay “Madaxweynayga ma aha” iyo erayo kale oo qalafsan, iyadoona maalmaha soo socdo sidoo kale la filaayo in mudaharaadyo kale ay ka dhacaan dalkaasi Mareykanka.
Banaanbaxyadaan looga soo horjeedo Donald Trump ayaa la xariirta hadaladiisii qalafsanaa ee uu jeediyey xiligii uu ololihiisa doorasho ku jiray, iyadoona in badan oo ka mid ah dadka ku nool Mareykanka ay aaminsan yihiin inuu yahay nin cunsuri ah oo burbur ku keeni kara dalka Mareykanka.
Dhinaca kale, Dadkii uu Donald Trump sida weyn u aflagaadeeyey waxaa kamid ahaa Muslimiinta, Maksikaanka iyo weliba Madowga Mareykanka, kuwaas oo intooda badan codkooda siiyey Hillary Clinton oo iyadu heshay inta badan cododka shacabka ka qeyb qaatay doorashada, balse looga guuleystay tirada “Electrol Vote” nidaamkaasi oo ay codsanayaan dad badan in isbedal lagu sameeyo.
Musharaxa ku guuleysta tirada Electrol Vote ayaa sida caadada ah noqda madaxweynaha Mareykanka, hadii xitaa uusan helin cododka ugu badan oo ay shacabka dhiibtaan, taas oo ka duwan doorashooyinka kale ee ka dhaca dalalka kale ee caalamka.